ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာလက်သည်းခွံပြီးသွားပြီလား? - News - ရှန်ဟိုင်း HUIZI ဒီဂျစ်တယ်
အချိန် - 2021-07-13 hits: 32
ဒီနေ့ခေတ်မှာမိန်းမတွေဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်တွေပါ။ မိတ်ကပ်နှင့်ဆံပင်ပုံစံကိုအထူးဂရုပြုခြင်းအပြင်အသားအရေထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လက်သည်းအနုပညာသည်ယခုခေတ်မီသည်။ လက်သည်းအနုပညာသည်သင်၏လက်ကိုပြုပြင်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကြည့်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မိန်းမတွေကလက်သည်းအနုပညာကိုလုပ်နိုင်တယ်၊
(ZB စီးရီး ANIMAIL ပုံနှိပ်) ZB
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မတူပါ။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်သူသည်ရှုထောင့်အားလုံးအပေါ်အထူးဂရုပြုရပေမည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်အပိုဘဝရှိသည်။ ခွင့်ပြုပါ''ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသည်လက်သည်းအနုပညာကိုလုပ်နိုင်မနိုင်ရှာဖွေလေ့လာသည်။ အမျိုးသမီးများကိုလာကြည့်ရှုရန်အကြံပြုပါသည်။
အချို့အမျိုးသမီးများသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက်လက်သည်းအနုပညာကိုပြုလုပ်ဆဲဖြစ်သော်လည်းအရေအတွက်လျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ လက်သည်းကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်လအနည်းငယ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းမကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်ကလေးကိုကာကွယ်လိုလျှင်၊''လက်သည်းအနုပညာဒီဇိုင်းများလုပ်ဖို့ငြင်းဆန်ဖို့အကောင်းဆုံး s ။ လက်သည်းဆိုးဆေးများတွင်ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်သောကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်''ဤအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်သန္ဓေသား၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်သန္ဓေသားပျက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ကိုးကား"ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း။ ဘာလဲအန္တရာယ်ကင်းတယ်. "By Lauren. Wienerhttps: //www.parents.com/pregnancy/my-body/pampering/pregnancy-pampering-whats-safe-whats-not/
အဓိကအချက် - မလုပ်ပါနဲ့။
နယူးယောက်မြို့အရေပြားအထူးကုဆရာဝန် Anne Chapas, MD (Chanel, Essie နှင့် OPI သုံးမျိုးလုံးမှကင်းလွတ်သည်။ ) သင်၏ဂဏန်းများကိုခြောက်သွေ့ရန်အချိန်ရောက်သောအခါခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပါသောပန်ကာကိုရွေးချယ်ပါ။
အလှတရားကိုနှစ်သက်သောကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲ။ သို့သော်အချို့သောရတနာမိခင်များကအလှတရားကိုနှစ်သက်ကြသည်။ အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောမိန်းမသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလှပလိုသည်။ လက်သည်းအနုပညာဒီဇိုင်းကိုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်သော်လည်းရွေးချယ်ရန်အခြားနည်းလမ်းများလည်းရှိပါသည်။ သင်လက်သည်းစတစ်ကာများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးငယ်များအားသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။
လက်သည်းအလှပြင်ဆိုင်မှရွေးချယ်နိုင်သောအစိုင်အခဲအရသာသာမကလူအများအပြား၏မတူကွဲပြားသောဒီဇိုင်းကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ လူတစ် ဦး စီ၏အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏မိသားစုဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
ထိုအခါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းသင့်လက်သည်းများကိုမည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်နည်း ?
Nix bit ။ ဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုတစ်ကြိမ်လုံးနဲ့လုံးဝမစွန့်လွှတ်ပါနဲ့ (သင်၏လက်သည်းများနှင့်အူမကြီးများကသင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်) ။
မှန်ကန်တဲ့ file ကို file လုပ်ပါ။ ပိုမိုချောမွေ့သောအကြံဥာဏ်များနှင့်ပိုမိုကျန်းမာသောလက်သည်းအိပ်ရာများအတွက်လက်သည်းနှင့်ခြေသည်းများကို ဦး တည်ခြင်းထက်သင့်လက်သည်းကို ဦး တည်ချက်တစ်ခုတည်းသို့သာ ဦး တည်ပါ
lotion အပေါ် Slather ။ အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်သင်၏လက်၊ ခြေထောက်နှင့် cuticles ပေါ်တွင်ကြွယ်ဝသောမုန့်ကိုသုံးပါ။
cuticles ပြန် Push ။ cuticles ဖြတ်တောက်ခြင်းရောဂါကူးစက်မှုကိုဖိတ်ခေါ်စေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်ညင်ညင်သာသာသူတို့ကိုပြန်တွန်း။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ညှပ်ယူလာပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်လက်သည်းသုံးကိရိယာများ (ညှပ်၊ ဖိုင်) ကိုအလှပြင်ဆိုင်သို့ယူဆောင်လာခြင်းဖြင့်သင့်ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပါ။
တစ် ဦး DIY ကုသမှုကြိုးစားပါ။ တူညီသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအညိုရောင်သကြားနှင့်သံလွင်ဆီကိုရောမွှေပါ။ ထို့နောက်လက်တဆုပ်စာကိုယူပြီးလျှင်သင်၏ခြေထောက်နှင့်ခြေထောက်များကိုနှိပ်နယ်ပေးပါ။
စာရွက်စာတမ်းများအတွက် ingrown လက်သည်းသိမ်းဆည်းပါ။ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကဒီညစ်ညမ်းတဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကိုကိုင်တွယ်ပါစေ။
နောက်တစ်ခု: ကလေးများ Nail Art ရှိသလား။